Philips HR1832 Juicer | Buy online | SHOP.COM.MM
အသီးတွေကို လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖျော်သောက်လို့ရတဲ့အပြင် 1.5L အထိရတော့ ခဏခဏ ထပ်ဖျော် စရာမလိုတော့ဘူး။
သုံးပြီးရင်လဲ ဆေးကြောရတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူပါတယ်။
အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ ပစ္စည်းလေး တစ်ခုပါ။
အိမ်ရှင်မတိုင်းဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။ Read more Hide
This Philips product is good and neat. I used it first time this morning, and my orange juice was smooth and sweet. The cleaning up is quite easy,too. Read more Hide
ဒီ Philips ဖျော်စက်လေးကို သဘောကျတယ်။ အသီးဖျော်ဖို့ထည့်တဲ့အခါ သက်သက်လှီးစရာမလိုဘူး။ အ၀ကျယ်လို့ အသီးကိုအလုံးလိုက်ထည့်လို့ရတယ်။ ဖျော်တာမြန်ပြီး တစ်ခါဖျော်ရည် ခွက်အများကြီးရတယ်။ ဆေးကြောလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
Philips Juicer လေးက ကြိတ်ရမွှေရအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဆေးကြောရလည်း အဆင်ပြေလို့ အရမ်းသဘောကျတယ်။ Read more Hide
If you are looking for an easy way to get some of your5a day then the Philips 500w HR1832 juicer is perfect for you Simply place whatever fruit or vegetables you like straight into the feeding tube, gently press down and watch the juice come out.
Strong 400 W motor for blending, mixing and crushing effectively.
Make up to 1.5 liters of juice in one go.
Thanks to the innovative juice extraction system with QUICKClean technology, this juicer extracts up to 1.5 liters of juice in one go without the need to empty the pulp container.
Specifications of HR1832 Juicer